Tsvaga akanakisa mahombekombe muAzores | Kufamba Nhau
Mhenderekedzo dzakanakisa muAzores
Susana Garcia | | General, Islands, Putugaro
El zvitsuwa zveAzores, zviri zvePortugalInzvimbo yekurota, nzvimbo yezororo inogara ichishamisa. Iri iboka rezvitsuwa zvipfumbamwe zvePortugal zviri pakati peAtlantic Ocean, zvichiumba chikamu cheinozivikanwa seMacaronesia. Zvitsuwa zveSud zvakanyanya iSâo Miguel neTerceira, kunyangwe iwe uchigona zvakare kunakidzwa nekununurwa kwakanaka mune vamwe. Graciosa, Pico kana Faial zvimwe zvezvitsuwa zvacho.
In the Azores tichawana makiromita emahombekombe kukwanisa kunakidzwa nemahombekombe ayo akanak Vashanyi vanodirana kuzvitsuwa izvi nezvikonzero zvakawanda, asi pamusoro pezvose nekuti nzvimbo dzadzo dzinozivikanwa kunge dzinoyevedza. Kune nzira dzekufamba-famba, nzvimbo dzizere nemagreenery, maguta nemataundi ane nhoroondo yakawanda uyezve mahombekombe ayo, atinozotarisa.
1 Mosteiros Gungwa (Sâo Miguel)
3 Santa Bárbara Gungwa (Sâo Miguel)
4 Porto Pim Gungwa (Faial)
6 Silveira Gungwa (Terceira)
7 Fajâ da Caldeira de Santo Cristo pamhenderekedzo (Sâo Jorge)
Mosteiros Gungwa (Sâo Miguel)
Iri gungwa riri kuchamhembe kwakadziva kumadokero kwechitsuwa. Sezvo mavambo ezvitsuwa ari anoputika, zvakajairika kuti isu tinowana akawanda mahombekombe ane jecha rakasviba. Ndizvo mahombekombe anomira pachena nekuti kumusoro kumusoro iwe unogona kuona zviwi zvakawanda inozivikanwa seMosteiros matombo, ayo anowedzera imwe runako kune iyo nzvimbo. Aya mamonithith emakomo anobuda mugungwa ane maumbirwo asinganzwisisike, akaumbwa nekuita kwemvura nemhepo. Iri gungwa rine nzvimbo dzakanaka uye nemvura yakachena, pamwe nekuve nemamwe masevhisi sekupaka.
Pachitsuwa cheSanta María tinogona kuwana mahombekombe akasiyana kubva kune ayo anowanzoonekwa munzvimbo dzese dzeAzores, dzinowanzove nejecha rakasviba uye dzine mhepo nemafungu. Asi mukati Santa María isu tine mahombekombe seFormosa, ayo ane jecha regoridhe uye inowanzova nemhepo yakanaka, inoita kuti inakidze. Iri harisi rakapamhamha pamhenderekedzo, asi jecha rayo rejecha rakaringana kukwanisa kupedza zuva rakanaka kumahombekombe uchishambidza mumvura yaro yakachena uye yekristaro. Kana isu tichida kukwanisa kuona gungwa zvizere, tinogona kukwira kuMiradouro da Macela. Nzendo dzekufamba-famba zvakajairika pachitsuwa kuyemura zvinoshamisa nzvimbo.
Santa Bárbara Gungwa (Sâo Miguel)
Iri gungwa riri munzvimbo yekuchamhembe-pakati pechitsuwa chekuputika. Izvo zviri chaizvo mu Ribeira Seca taundi uye inzvimbo imwechete yejecha kiromita. Iko hakuna mahombekombe akareba kwazvo pachitsuwa ichi, saka ichi ndicho chimwe cheakakura kwazvo. Mariri, semamwe akawanda ezvitsuwa, pane akakwana mamiriro ekudzidzira emitambo senge kufashaira, kitesurfing kana kufefetera mhepo, ndosaka vatambi vazhinji vanozvisarudzira kunakidzwa nemitambo yavo yavanofarira. Iri igungwa rakakurumbira pachitsuwa, saka zvakare rine mabasa mazhinji senge nhandare, mabhawa kana dzimba dzekugezera. Saka mhuri yese inogona kunakidzwa neyakafanira zuva remahombekombe umo munhu wese anogona kuve nenguva yakanaka.
Porto Pim Gungwa (Faial)
Iri gungwa i chena jecha pamhenderekedzo, chimwe chinhu chisina kujairika muzvitsuwa. Inowanikwa padyo nemusha wekuredza uye kunyangwe isiri yakakura kwazvo nharaunda inoiita nzvimbo inodziya uye yakanaka. Nzvimbo yakakwana ye snorkel, sezvo tichigona kuona hove dzakawanda.
Caloura izita remusha mudiki wekuredza pachitsuwa. Ichi chitsuwa cheAzores uye nevamwe vazhinji vane akanakisa echisimba madziva akaumbwa mu volcano dombo iro rinogadzira zvinoshamisa uye zvakasarudzika mhenderekedzo. Ichi ndicho chimwe cheanokwezva anounza vanhu kuchitsuwa ichi gore rega rega. Isu tine diki diki rine mvura yebhuruu yekugezesa uye padyo nemahombekombe kune rakanakisa dziva rechisiki iro rakanakira kugeza. Imwe yemahombekombe ayo anomira nekuda kwavo peculiarities.
Silveira Gungwa (Terceira)
Ichi ndicho chimwe chezvitsuwa zvikuru, saka hapana kushomeka kwenzvimbo dzekugeza. Iri gungwa riri padyo neAngra do Heroismo. Haisi chaiyo gungwa rechisikigo, asi rurimi rwekongiri runosvetukira kunze mumvura uye inopa nzvimbo kune vanogeza. Sezvo nzvimbo dzakakomberedza dzine mabwe, ino ndiyo nzvimbo inonyanya kufarirwa yekugeza.
Fajâ da Caldeira de Santo Cristo pamhenderekedzo (Sâo Jorge)
Kuti tinzwisise zvakaita iri gungwa, isu tinofanirwa kuziva zvavanoreva neshoko rokuti fajâ. Izwi iri rinouya kuzotsanangura mapani iwayo anoumba pamhenderekedzo pamusoro pemazana emakore nekupararira kwemabota, zvichipa makungwa madiki emakomo akapoteredzwa nehuswa nematope. Kubva pakakwirira unogona kuona kuti ndiko kuwedzerwa kwemateru emakomo anoputika. Ichi chitsuwa chine mitsetse mizhinji uye ichi ndicho chimwe cheakanyanya kunaka. Kuti usvike pairi, unofanirwa kupfuura ne Natural Reserve munzira yekukwira kuti usvike nzvimbo yemahombekombe, uko kwatinozoona dzimba dzekusefa kuti titange kana kudzidzira mutambo uyu. Kune zvakare mahombekombe ematombo erima nematombo uye negungwa rakanaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » General » Mhenderekedzo dzakanakisa muAzores
Zvitsuwa zvakaisvonaka kwazvo muGirisi